Ubungasese kunye neNtuthuzelo kwi-Villa yaseSpain ebuyiselweyo ngo-1930s
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguLisa & Thomas
· Igumbi lokulala labucala eliyi-1
Yiya kwindawo yabucala yegumbi elibuyiselweyo elinesitayile saseSpain apho iisilingi zeplanga kunye nemibala ye-pastel yenza imvakalelo yokwenyani.Bukela umabonwakude ngakwindawo epholileyo yangaphakathi kwaye uhlale ngaphandle kwibala elinomthunzi ngalo naliphi na ixesha lemini. Yonwabela intuthuzelo kunye nendawo eyongezelelweyo yebhedi enkulu.
Igumbi lokuhlambela elisegumbini lokulala, I-King bed, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
4.95 (iingxelo zokuhlola 402)
Indawo yekhaya kwisiXeko seStudio ibonelela ngeendawo zokuhlala ezinoxolo ngelixa ikufutshane nokhetho oluninzi.Chitha imini kwi-Universal Studios ekufutshane, tyelela i-LA edumileyo yaseHollywood Walk of Fame, kwaye ubambe imitha eVenice Beach.
Umgama ukusuka eLos Angeles International Airport
imizuzu eyi-32 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Lisa & Thomas
Umbuki zindwendwe wakho uza kube ekhona kwindawo oza kuhlala kuyo esebenzisa iindawo ezinokusetyenziswa nangabanye abantu kunye nawe. Uza kufumaneka xa ufuna nantoni na ngexesha ohleli apho.
ULisa & Thomas yi-Superhost
Inombolo yomthetho: HSR19-000176